ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက် မနှောင့်ယှက်ရန် ကျားဖြူပါတီ - Yangon Media Group
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက် မနှောင့်ယှက်ရန် ကျားဖြူပါတီ
ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက် မနှောင့်ယှက်ရေးအတွက် ကျားဖြူပါတီက အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများထံ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
”ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ TNLA ရော RCSS /SSA ကို ရော ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်ပါ တီဘက်မှမလိုက်ဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက် ဝင်မစွက်ဖို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားပါတယ်” ဟု ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်ကပြောသည်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အချို့သည် ယခင် ၂ဝ၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ကျားဖြူပါတီကိုမဲ မထည့်ရန် စာထုတ်တားမြစ်ဖူး ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းထံကတော့ အခုချိန်ထိအကြောင်း ပြန်စာမပို့သေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ လက်ရှိကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ မဲဆွယ်ကာလတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မည်သည့်နှောင့်ယှက်မှုများ မပြုလုပ်သေးကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖိအားမရှိရင်နိုင်မှာပါ၊ ခု လောလောဆယ်တော့ ဘာဖိအားမှပေးတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲနီးရင်တော့ ဘယ်လိုလာမလဲတော့ မသိသေးဘူး” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျားဖြူပါတီက လွှတ်တော်သုံးရပ်အတွင်း ၅၇ နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် ကျားဖြူပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းပန်မြို့နယ် ပြည် နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးသာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ယခုကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လဲချားမြို့နယ်တစ်ခုသာ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို ၁၃ နေရာ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပြီး ကန်ပက်လက်၊ လဲချား၊ တာမွေနှင့်မြင်း ခြံမြို့နယ်များတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (လေး)နေရာ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် (တစ်) နေရာ နှင့်၊ မတူပီ၊ တမူး၊ ရသေ့တောင်၊ အုတ်တွင်း၊ သပိတ်ကျင်း၊ မင်းဘူးနှင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တို့တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် (ခုနစ်) နေရာနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်တစ်နေရာတို့အတွက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရေလုပ်ငန်းများသို့ MoU စနစ်ဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများ တရားဝင် စေလွှတ်ရေးအတွက် ??
ယခုနှစ်ခြောက်လအတွင်း လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှ??
အောင်မြေမန္တလာ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းပေါင်း ၂၆ဝ ကို မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း နေရာ ချ
သွေးတိုးကျဆေး ၅၉ မျိုး ရောင်းချမှု တောင်ကိုရီးယား ပိတ်ပင်
ပြင်ဦးလွင်ဒေသမှ ထုတ်လုပ်သည့် သစ်သားအနုစိတ် အမှတ်တရပစ္စည်းများကို ပြည်ပထက် ပြည်တွင်းစိတ်ဝ?
တောင်အာဖရိက၌ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ၊ လက်ရှိ အာဏာရပါတီမှ အနိုင်ရရှိ